Govt to Borrow $170.72 Mln for Electrification Project | Myanmar Business Today
HomeBusinessGovt to Borrow $170.72 Mln for Electrification Project
Govt to Borrow $170.72 Mln for Electrification Project
The Ministry of Planning, Finance, and Industry requested permission from the Pyidaungsu Hluttaw to borrow $170.72 million from ADB Bank to implement an electrification project that will power 400,300 households.
This project will take seven years to implement, and the annual interest rate is 1 percent during eight years of the grace period and 1.5 percent in 24 years of repayment.
The project will provide power to 8.77 percent of households in Karen State, 6.31 percent of families in the Magway Region, 8.77 percent of families in the Bago Region, and 17.52 percent in Ayeyarwaddy Region.
The country managed to provide power to 50 percent of the total population in December 2019 and targets to provide power to 75 percent of by the 2025-26 Fiscal Year, and 100 percent by 2030 under the National Electrification Plan. The government is trying to diversify its power sources ranging from water, solar, and heat.
ကျေးရွာပေါင်း၂,၈၁၅ရွာမှအိမ်ထောင်စုပေါင်း၄၀၀,၃၀၀စုကိုနိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်မှတိုးချဲ့ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မည့်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်တည်ဆောက်ရန် ADB ဘဏ်မှ ချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၇၀ ဒသမ ၇၂ သန်း ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးခင်မောင်၀င်းနှင့်စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းတို့က ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
စီမံကိန်းကာလကို ၇ နှစ်သတ်မှတ်ထားပြီး ချေးငွေရဲ့အတိုးနှုန်းမှာ ဆိုင်းငံ့ကာလ ၈ နှစ်တွင် ၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး ပြန်ဆပ်ကာလ ၂၄ နှစ်မှာ ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင်စုအလိုက်မီးလင်နိုင်မည့် ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ၈ ဒသမ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ မကွေးတွင် ၆ ဒသမ ၃၁ ရာခိုင်နှုန်း ပဲခူးတိုင်းအရှေ့တွင် ၈ ဒသမ ၇၇ ရာခိုင်နှုန်း ဧရာဝတီတိုင်းတွင် ၁၇ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်း တို့ဖြစ်သည်။
နေပြည်တော်၊ ပုသိမ်၊ ပဲခူး၊ မကွေး၊ ဘားအံမြို့များတွင် Destribution Automation System (DAS) စနစ်ကို Pilot Project ၅ ခု အဖြစ် တပ်ဆင်၍ ၁၁ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းကွန်ရက်ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ နေပြည်တော်မှ စောင့်ကြည့်ကွပ်ကဲနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
ယင်းမံကိန်းဆောင်ရွက်မယ့်လုပ်ငန်းများအားလုံး၏စုစုပေါင်းတန်ဖိုးသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၉၁ ဒသမ ၇၄ သန်းကုန် ကျမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၉-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းကို နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်မှ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ခဲ့ပြီ ကာ ၂၀၂၁-ခုနှစ်တွင် ၅၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၂၀၂၅-၂၀၂၆ ခုနှစ်တွင် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအထက်နှင့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး (၁၀၀)ရာခိုင်နှုန်း အပြည့်အဝ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်မူဝါဒနှင့်အညီ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍတွင် ရေအားစွမ်းအင်၊ အပူစွမ်းအင်၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် ကဲ့သို့သော စွမ်းအင်အရင်း အမြစ်မျိုးစုံကို အသုံးပြု၍ ရေတို/ရေရှည်စီမံချက်များ ချမှတ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ၊ တိုင်းဒေသကြီးဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် JICA, ADB, World Bank များထံမှ အတိုးနှုန်း သက်သာသော နှစ်ရှည်ချေးငွေများဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊လည်းသိရသည်။
Previous articleA $180 Mln Water Treatment Plant to Be Implemented
Next articleApartments from Myayinanda Housing to be sold this year